Sheekh Dirir Oo Ka Hadlay Jawaabaha Laga Bixinayo Dacaayadaha Iyo Aflagaadada Gaaladu Ku Hayaan Nebi Maxamed | #1Araweelo News Network
Hargeysa(ANN)-Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir ayaa sheegay hadii Gaalada iyo saxaafadoodu isku raaceen in Nabiga CSW wax laga sheego, in laga jawaabo waa xaq iyo waajib, waxaanay ka turjumaysaa jacaylka aynu Nabiga CSW u qabno, iimaankeena iyo inuu innagu weyn yahay.
Khudbadii jimcaha manta oo Sheekh Dirir kaga hadlay waajibka muslimiinta ka saran difaacida sharafta Nabi Maxamed NNKH ayaa yidhi,
“Haddii gaalada iyo saxaafadoodu isku raaceen in Nabiga CSW wax laga sheego, in laga jawaabo waa xaq iyo waajib. Waxaanay ka turjumaysaa jacaylka aynu Nabiga CSW u qabno, iimaankeena iyo inuu innagu weyn yahay. Cidda kugu weyn marka meel lagaga dhaco isma hannatid, oo fadhiga ma qabatid? Waxaynu ognahay manta qofka meel lagaga dhaco ee saxaafada laga caayo ama qabiilka wax laga sheego ama wadamada caalamka midkood wax laga sheego, auunyadu way istaagtaa, oo qoladaasi muddo ayey hadlaan? Markaa dadku hadday ka aamusaan arrinka Nabi Maxamed CSW iyo u hiilintiisa, waanu ku weynayn ayey ka dhigan tahay, kama xanuunsatid waxaan kugu weynayn?
Qiso kaloo kitaabka saxiix Muslim oo xadiis Abu Hurayra RC weriyey “Ninkii Abii jahal la odhan jiray ee erebta darnaa ayaa maalin dadkii saaxiibadii la hadlay, intuu Nabigu CSW Maka joogay, oo yidhi ‘ma idinkoo dad waxgaranaya oo waaweyn ayuu Maxamed intuu fooda dhulka dhigo ciida ku xoqxoqaa idinkoo arkaya? Maxaad wax uuga qaban weydeen? Dee kaalay adigu ka qabo ayey yidhaahdeen? Waa hagaag; bal markuu sujuudo ii soo sheega ayuu yidhi, qoorta Ayaan kaga joogsane? Ka dib Nabiga CS woo sujuudsan ayuu u yimi, talaabooyin kooban markuu u jiray ayuu dib u gurasho bilaabay, waanu cararay? Gaaladii ayaa u yeedhay oo weydiisay waxa ku dhacay? Waxuu yidhi markaan u dhowaaday ayaa dhexda god weyn ka dilaacay naaro kasoo holcayaan, naftaan u baqay? Rasuulka CSW oo saxaabadii weydiisay ayuu yidhi ‘Haduu intaa ka soo dhowaan lahaa malaa’igta ayaa xubin xubin u jari lahayd ayuu yidhi Nabigu CSW, oo gaalkii waxuu doonay Ilaahay SW ka difaacay.
Sheekh Maxamed oo gebagebadii ka hadlayey talaabada bulshada islaamka kala gudboon difaacida Nabiga CSW ayaa sheegay in ummada islaamka laga doonayo in cayda noocan oo kale ee heer caalami ah ee dawlado ka soo fulay inaynaan eeganin, waa dembi? Nabiguna CSW xadiis waxuu ku yidhi “Qofka dembi arka gacan wax hakaga qabto, hadaanu awooddin, hadal, hadaanu awoodin niyada haka naco?’ markaa hadba talaabooyinka aynu karayno inaan qaadno waajib ayey ku tahay madaxda muslimka ah, waxa waajib ah culimadu inay ka jawaabaan, waxa waajib ah in kolba waxii munaasib ah lagaga jawaabo, in badeecadahooda la naco oo nacaybshiyaha loo qabo la muujiyo waxay keeni kartaa inay soo u dhacaan.